बोल्दाबोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, मनै कुँडिन्छ – List Khabar
Home / समाचार / बोल्दाबोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, मनै कुँडिन्छ
बोल्दाबोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, मनै कुँडिन्छ
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 45 Views
२१ जेठ, काठमाडौं । दुई वर्षदेखि म धुलिखेल हस्पिटलमा नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत छु । कोरोना महामारीको संक्रमण सुरु भएदेखि भने म अस्पतालको आईसीयू केयरमा सेवा गर्दै आइरहेकी छु ।
कोरोनाको पहिलो लहर जब नेपालमा पनि सुरु भयो, त्यसबेलाको अवस्था निकै फरक थियो । नयाँ महामारी भएकाले पनि होला निकै त्रासको अवस्था थियो ।
कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहर निकै फरक अनुभव गरेकी छु । पहिला कोरोना भन्नेबित्तिकै हाम्रो हात खुटा नै काँपेर आएको थियो ।
बिरामीको अवस्था भने पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा फरक पाएकी छु । पहिला बिरामी भएर आउने संक्रमितहरु पनि ठिकठाक अवस्थामै आउनुहुन्थ्यो । आफ्नो काम आफैं गर्नसक्ने अवस्थाकै आउनुहुथ्यो ।
तर दोस्रो लहर सुरु भएपछि बिरामी भएर आउनेहरु निकै जटिल अवस्थामा आउने गरेको पाएकी छु । उहाँहरु निकै गाह्रो भएपछि अस्पताल आउनुभएकोजस्तो अनुभव गरेकी छु । बिरामी मात्र होइन बिरामीका परिवारजन पनि निकै डराएको मनस्थितिमा अस्पताल लिएर आउनुहुन्छ ।
त्यसले हामीलाई नैतिक मात्र होइन भावनात्मक दबाव पारिदिन्छ । हामीले बिरामीको सकेजति केयर गर्दागर्दै र कुरा गर्दागर्दै पनि कतिपय बिरामी आँखा चिम्लिदिनुहुन्छ, त्यो बेला भने हाम्रो मन निकै भारी भएर आउँछ । भित्र कतै निकै गहिरो दुःखे झैं हुन्छ । हामीले सकेको गर्दागर्दै पनि केही गर्न सकेनौं कि जस्तो पीडाबोध हुन्छ ।
कतिपय बिरामीहरूले ‘मलाई बचाउनुस् नानी’ भनेर आँखाबाट आँसु बगाइरहँदा हाम्रो मनमा पनि आफ्नै आमाबुवा, दाजु-दिदी रोइरहेकोजस्तो अनुभूति हुन्छ ।
कोरोनाको बिरामीहरूको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुँदा आफन्तहरुलाई त तनाव हुने नै भयो, हामी पनि कम तनावमा हुँदैनौं ।
निको बनाएर कति चाँडो घर पठाउँ भनेर सेवा गरेको बिरामी कहिल्यै घर नर्फकने गरी निदाइदिँदा निकै नमिठो लाग्छ, मन पोल्छ, आफन्तलाई के भनिदिनुजस्तो हुन्छ । हामीलाई पनि निक्कै गाह्रो हुन्छ ।
केहीबेर अघि बोलिरहेको, केही सोधिरहेको, केही भनिरहेको बिरामी पनि केही छिनमै कोल्याप्स भइदिँदा निकै मन कुडिन्छ । अन्र्तहृदयदेखि नै रुन मन लागेर आउँछ । पेशा नै यस्तो, रोयर नहुने !
कोरोनाको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरुको अवस्था सम्झेर सिरियस भएर आउने नयाँ बिरामी देख्दा पनि निकै डर र चूनौति महसुस हुन्छ–कतै बचाउन नसकिने हो कि ? भनेर ।
तर बिरामीहरुले पनि सिरियस भएपछि मात्रै अस्पताल आउनेभन्दा बिरामी हुँदै चिकित्सककोमा सम्पर्क गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ, यति धेरै जटिल अवस्था र कारुणिक अवस्था कमै आउँथ्यो होला ।
उपकरण अभावले झन गाह्रो
दोस्रो लहर सुरु भएपछिको कुरा हो । अस्थि भरखरै एकजना ४० वर्षीय बिरामी उपचारका लागि आउनुभयो । उहाँलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने तयारी भयो । तर आईसीयूमा उपचार गराइरहेका अर्को बिरामीका आफन्तले नमानेपछि उहाँलाई आईसीयूमा सार्न सकिएन ।
त्यो प्रकारको अवस्था भएको भए बिरामीको धेरै समयसम्म केयर गर्न सक्थ्यौ होला भन्ने अहिले पनि लाग्छ । आईसीयू खाली नहुँदा उहाँको एक घण्टापछि मृत्यु भयो । हामीले हेर्दाहेर्दै र केही गर्न खोज्दाखोज्दै उहाँले आँखा चिम्लिएको देख्दा मेरो आँखा निकै बेरसम्म रसायो । एकफेर त डाँको छोडेर रुन मनलागेर आयो । तर के गर्नु..?
यस्ता घटनाले हामीलाई पनि कसरी काम गर्नु भन्ने तनाव हुन्छ । सबै कुराहरु म्यानेज गर्न नसक्दा वा म्यानेज हुने स्थिति नहुँदा आँखै अगाडि धेरैको ज्यान गयो, त्यसले हामीलाई पनि होपलेसजस्तो बनायो । तर कतिपय नसोचेका बिरामी पनि निको भएका घटनाले भने उत्साहित पनि बताउँछ ।
उपचार र संक्रमितको केयरका क्रममा तमामौं भोगाइहरु छन् । कतिपय बिरामीहरूले ‘मलाई बचाउनुस् नानी’ भनेर आँखाबाट आँसु बगाइरहँदा हाम्रो मनमा पनि आफ्नै आमाबुवा, दाजु-दिदी रोइरहेकोजस्तो अनुभूति हुन्छ । जब हजार कोसिस गर्दागर्दै जोगाउन सकिँदैन, आफूले पनि धेरै कुरा गुमाएको अनुभूति हुन्छ ।
Previous अब खाना पकाउने ग्यासको मुल्य सोच्नै नसकिने गरी घट्ने कति पर्छ त अब।
Next कोरोनाको तेस्रो र चौथाे लहरको चेतावनी, बालबालिकाका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन